Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland Granit Xhaka Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ
Emelitere ikpeazụ June 20, 2020
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Xhakaboom'. Ihe Granit Xhaka nke a na-amụ na nwata na akụkọ akụkọ ndụ na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ, ndụ mmekọrịta na ọtụtụ ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ikike nke etiti ya mana ole na ole na-ele Bioit Xhaka's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Granit Xhaka Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ mbido
A mụrụ Granit Xhaka na 27th nke September 1992 na Basel, Switzerland.
A mụrụ mama ya Xhaka, Elmaze Xhaka na nna ya, bụ Ragip Xhaka. Nne na nna Albania sitere na Kuršumlija, Serbia.
Iji ghọta akụkọ ndụ mbụ nke Granit Xhaka bụ ịghọta ezinụlọ ya; otú ha si taa ahụhụ, otú ha si zukọta ma rụọ ọrụ n'atụghị egwu iji merie. Malite n'oge kachasị dị umeala n'obi, njem nke nwa na-eto eto bu ụzọ buru ụzọ gaa njem ndị mụrụ ya na-aga na nchekwa, na-agbapụ mba na-aga agha obodo.
Ndị nne na nna Xhaka maara na ọ dị ha mkpa ịmalite mmalite, na 1990, ha kwagara Switzerland. Nwa ha nwoke mbụ, Na-ada, a ga-amụ na Basel na 1991, na Granit na-eso 18 ọnwa ka e mesịrị.
Dị ka Granit Xhaka na-etinye ya; "Papa m gosipụtara ike dị egwu Na-ada ma ejiri m ike iche echiche ya, " Kwuru na. "Anyị nwere arụsị a, onye nlereanya a, onye kụziiri anyị na ị ghaghị ịdị ike iji nweta ihe. N'ihi ya, anyị tolitere nnọọ ike. Ọ bụ ya mere na ọkpụkpụ ahụ, anyị nwere ikike iche echiche a iji weghara ihe ma gaa na ya n'ezie. "
Xhaka ji ihe niile gaa Switzerland, na ohere ọ bụla e nyere ya n'ebe ahụ, ma ọ gaghị emeli ma chefuo mgbọrọgwụ Kosovo na Albania, nke na-anọgide na-emetụ ya aka ruo taa.
Granit Xhaka Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ mmekọrịta
Ihe ngosi di omimi di n'okpuru adighi onye ozo karia nwa nwanyi Leonita, nwanyi nke mara mma. Ọ bụ nwunye mara mma Granit Xhaka. Dịka Xhaka, Lekaj si n'ezinụlọ Kosovo Albanian.
Leonita buru ụzọ zute ya mgbe ọ ka na-egwuri egwu maka club ya gara aga Borussia Monchengladbach. Ọ na-arụ ọrụ maka otu òtù Bundesliga ma jide anya Switzerland. N'ezie, ọ mara ezigbo mma.
Dị ka ọ na-achọ ibu nnukwu icecreams, ma ndị hụrụ n'anya na-aga Miami maka ezumike ezumike ha.
N'April 2017, Granit Xhaka mere otu akwa uwe na-achọ mma ma gbadaa n'otu ikpere iji jụọ onye òtù ọlụlụ maka aka ya n'alụmdi na nwunye. Leonita Lekaj kwuru ee, ọ na-eme ememe na Instagram. Xhaha kwukwara foto ahụ dị na akaụntụ Instagram ya na ozi na-esonụ: Ọ sịrị YES. Obi ụtọ ọlaedo bụ ọrụ ebube, nwunye edo edo bụ paradaịs! Mr & Mrs Xhaka.
Granit Xhaka weghaara oge ya ka ya na enyi ya nwanyị Leonita Lekaj nọrọ ogologo oge.
Mba Switzerland na-ekwupụta ozi ọma ahụ site na ịde foto foto 'Mr na Mrs' na nwunye ya na Instagram. Alụmdi na nwunye ha mere na July 2017.
Granit Xhaka na Leonita Lekaj na-ebi ndụ obi ụtọ mgbe ọ bụla.
Granit Xhaka Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ Ezinụlọ
NME: Ragip Xhaka bụ onye Kosovarian dị mpako, bụ onye na-eme mkpesa na Yugoslavia mgbe ahụ na Kosovo na ya na ndị ya nwere ikike ịnọ.
Ọ kwadoro maka ikike ha ma bụrụ na ha bụ ikike ọchịchị onye kwuo uche ya-ihe ndị dị mkpa, dị ka inwe ike ịme ntuli aka. Ọ bụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Xhaka kwuru, ... Papa m na - ajụ, sị: 'Gịnị mere na anyị abụghị ndị Democrats ebe a? Anyị kwesịrị inweta ochichi onye kwuo uche ya. Anyị kwesịrị ka a nụ ya. ' Ragip Xhaka mechara jide ya. Ọ bụghị naanị ya. E nwere ndị ọzọ jidere, gụnyere nwanne nna ya, bụ onye a tụrụ mkpọrọ ọtụtụ afọ gara aga. O nwetara afọ 15. A mara Ragip mkpọrọ n'ụlọ 3 afọ na ọkara.
"Dị ka m maara, ọnwa ole na ole mbụ ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ dị mma," Kwuru na. "Ma mgbe ahụ iti ahụ malitere."
Mmekorita nke Xhaka Sr ga-etinye aka na ihe ngosi megide ọchịchị gọọmenti etiti na Belgrade. Ọ bụ 1986 na ọ bụ nwa akwụkwọ 22 dị afọ iri na abụọ na Mahadum Pristina na Kosovo, nke bụzi mpaghara kwụ ọtọ na Yugoslavia. A ga - ejide ya ma mee ka ọ bụrụ mkpirikpi afọ isii. Xhaka Sr keere otu cell na ndị ikom anọ ọzọ, ọ ga-ahapụkwa otu ugboro kwa ụbọchị - maka 10 nkeji.
Xhaks gara n'ihu ..."Dị ka nwa ya, akụkọ ahụ bụ ihe na-emetụ m n'ahụ nke ukwuu - n'ezie, n'ezie n'ime obi m," Xhaka kwukwara ... "Iji kọwaa nna m n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị ghaghị ịghọta oke omimi ya. Ọ dị njọ. Ana m ajụ ya mgbe ụfọdụ: 'Gwa m ọzọ,' mana m ka echeghị na o kpughewo ya. Enweela oge ịgbachi nkịtị ebe m chere na ọ kpochapụrụ ihe ọ bụla, ma ọ bụghị agbagha eziokwu ahụ. Ma eleghị anya, ọ dị nnọọ ukwuu, ọ chọkwara ịhapụ ụmụaka ya niile iru uju.
Otu n'ime ihe ndị dị ịtụnanya bụ na anyị amaghị ihe mere Ragip Xhaka ji tọhapụ ya ozugbo site na ikpe ya kama a hapụrụ ya n'otu oge ahụ dịka nwanne nna ya. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ezinụlọ maara banyere ya ruo mgbe ha tụgharịrị n'ọnụ ụzọ. Echiche nke Xhaka bụ na ha na-agbaso nkwekọrịta ka ha soro iwu ụlọ mkpọrọ ahụ, na-emechi ọnụ ha ma ghara ime ka nsogbu ọ bụla. Nke a mere ha ji hapụ ha n'ihi na ha chere: 'Ọ dịghị nsogbu ọzọ.' Ma ọ dịghị onye doro anya banyere nke ahụ.
Ragip Xhaka mgbe a gbapụrụ ya mkpọrọ nyere ike site n'ịchọpụta ndụ ka mma, nke ga-abụ otu ụbọchị na mmụọ nke ụmụ ya ga-alụ ọgụ nke aka ha na egwuregwu football. O si na Podujevo, District nke Prishtina gaa Switzerland na 1990 kwagara.
Nne: Otu n'ime ihe kachasị akọwa banyere mama mama Xhaka bụ na ọ bụ naanị di ya ka ọ hụrụ ọnwa atọ tupu e jide ya ma jailing ya.
Otu oge kwuru ozugbo. "Enwere m nkwanye ùgwù dị egwu maka mama m. Anụtụbeghị m banyere otu nwanyị ka ya na nwoke nọrọ na ọnwa atọ - na nwata ahụ - ma na-eche ya ruo afọ atọ na ọkara. Nne m bụ onye na-enweghị atụ. "
Mgbe Elmaze Xhaka nọdụrụ n'oche ya n'akụkụ ụmụ nwanyị di ya n'ọdịnihu, o yi uwe ọkara na ọkara Switzerland / uwe elu Albania. Ọ bụ ezie na ọ bụ Switzerland, ma na-anọpụ iche n'ihi na ụmụ ya nwoke abụọ na-egwuri egwu na mba dị iche iche. Ya na nwunye nwa ya nwanyị dị nnọọ nso.
NNE: Ragip Xhaka dị elu (a mụrụ 28 March 1991) bụ nwanne nwoke okenye na Granit Xhaka. Egwuregwu Xhaka bụkwa ọkachamara n'ịgba chaa chaa ma na-egwuri egwu maka FC Basel na ndị mba Albania. (Dị ka n'oge ederede).
SISTER: Agnesa Xhaka bụ nwa nwanne nwanyị Granit Xhaka onye bụkwa nwanne ya nwoke ọ hụrụ n'anya.
N'otu ụbọchị Granit Xhaka kwadoro ụbọchị ọmụmụ ya. Agnesa Xhaka dere okwu dị ụtọ maka nsogbu ya ma soro ya na foto. Ma ihe na-adọta mmasị karị bụ okwu o dere na foto a. Ọ na-ekwu ...
"M hụrụ gị n'anya nke ukwuu, ị bụ nwanna kachasị mma n'ụwa," ọ na-ede, na-egosi na ọ na-akọwa nwanne ya nwoke ozugbo, Granit dị ka "Ọkacha mmasị". Nke a nwere ike ime ka o doo anya na Granit nwere ịhụnanya karịa nwanne ya okenye. Ka ọ dịgodị, Taulant's Instagram enweghị ihe ọ bụla ma yiri nke a.
Granit Xhaka Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Personality
Granit Xhaka nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Granit Xhaka: Ọ bụ onye na-arụkọ ọrụ, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye amara, onye ezi uche na onye na-elekọta mmadụ.
Ọdịdị nke Granit Xhaka: Ọ nwere ike inwe obi abụọ. N'ikwu nke a, ọ na-atụ ụjọ na ọ na-eche ihu ma nwee àgwà nke iwe iwe.
Ihe Granit Xhaka nwere mmasị: Ịdị nwayọọ, ikerịta ndị ọzọ na n'èzí.
Ihe Granit Xhaka achọghị: Ime ihe ike, ikpe na-ezighị ezi, oké ụda olu na nkwekọrịta.
N'ozuzu, Granit Xhaka nwere udo, dị mma, ma ha kpọrọ asị naanị ha. Mmekọrịta ahụ dị ezigbo mkpa maka ya.
Granit Xhaka Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ọrụ na Nchịkọta
Xhaka malitere ọrụ ya na ụlọ nkwari akụ nke obodo, Basel, na-emeri Switzerland Super League na nke ọ bụla n'ime oge abụọ mbụ ya. O wee kwaga Borussia Mönchengladbach na Bundesliga na 2012, na-emepụta aha ya dị ka onye na-egwu nkà na nkà na onye ndú ụwa tinyere mkpesa maka àgwà ya. E mere ya onyeisi ndị Borussia Mönchengladbach na 2015 mgbe ọ dị afọ 22, na-eduga ndị otu na UEFA Champions League maka oge nke abụọ. O mechara nyefee Arsenal na May 2016 maka ego na mpaghara £ 30. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Granit Xhaka Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Onye Ndú nke Ndị Nwoke
Borussia Mönchengladbach nwere mmalite nke 2015 / 16 kachasị njọ mgbe ha meriri egwuregwu ise nke mbụ iji hapụ ha ka ha nwụọ.
Onye ndu Lucien Favre kwusiri ike n'oge na-adịghị anya mgbe Andre Schubert nwụsịrị. Na onyeisi ndị agha Tony Jantschke merụrụ ahụ, ihe mbụ Schubert mere bụ inye aka na Xhaka nanị ụbọchị ole na ole tupu ụbọchị 23. A họpụtakwara ya onye isi obodo ya, Switzerland.
"Anyị họọrọ Granit n'ihi na ọ bụ onye dị mkpa maka anyị," Schubert kwuru. "Ọ nwere àgwà, ma ọ ghaghị ịmụta iji ibu ọrụ."
Njem ahụ rụrụ ọrụ dị ebube dị ka Mönchengladbach wee laghachi azụ n'ọsọ ọsọ nke Njikọ Njikọ. A na-eburu Xhaka n'ihu, ọbụna na-agbanye n'ọsọ egwuregwu mbụ ya dị ka onyeisi ndị agha. N'okpuru nduzi ya na nke Schubert anyị, Mönchengladbach mesịrị mechaa nke anọ ma ruo eruo maka agbachitere Njikọ Njikọ.
Idu otu otu na 23 abụghị egwuregwu. Wenger mere otu ihe ahụ Cesc Fabregas na ọ bụ ezie na o nweghị nkwado dị mkpa maka ndị mara mma gburugburu ya, onye Spaniards kpaliri ha ka ha merie n'isi anọ na agbụrụ egwuregwu ndị agbụrụ.
Xhaka nwere ike ịbụ onye ọkpọsịnyere onye na-eduga ìgwè ahụ mgbe oge ahụ ruru na Wenger chọrọ mkpa isi na ndị nwere ntukwasi obi karịa n'etiti ogige ahụ. Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Granit Xhaka nke Ụmụaka na akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Ụkọlọtọ nke Switzerland